Somaliland: Sir Fashilisay Qorshe Qaran-Doox Ah Oo Lacag Badan Lagu Bixiyey, Dabino Lagu Waxyeelaynayo Jiritaanka Somaliland Oo Dhicisoobay Iyo Hubkii Badda Australia Lagu Qabtay Oo La Ogaadey Cida Fangaraysay - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Sir Fashilisay Qorshe Qaran-Doox Ah Oo Lacag Badan Lagu Bixiyey, Dabino...
Tan iyo intii ay bilaaban tahay dhaq-dhaqaaqa maamulka maqaar saarka ah ee khaatumo waxaa bilaabmay dhitooyin ay maleegayaan nabadiid iyo qarandiid ka soo horjeeda qaranimada iyo jiritaanka somaliland oo ka xun qaranka 25 jirsadey ee dhabaha saaray horumarka iyo hilinka dawladnimo, waxaana soo ifbaxayey maalinba maalinta ka dambaysa hadimooyin ay doonayaan inay kuwiiqaan somaliland balse ay suurta galnimadeedu ku adkaatay waxaanay maamulka uu horjooge looga dhigay cali khaliif galaydh oo ku hungoobay siyaasada somalida gaar ahaan maamulka somaliya,waxaana ay caleemo saar ay ku magacaabeen madaxweyne qoorta u galiyeen cali khaliif waxaana ay buulal ka waabeen ay hoy ka dhigteen deegaano ka mida bariga sool balse taas waxaa ka diiday ciidamada qaranka oo jiif iyo joogba udiiday.
Waxaana ay dhamaan ka saxal saareen deegaanada sool hoosyimaada , iyagoona markii dambe udiga rogtay magaalada buuhoodle oo ay mudadii u dambaysay ka soo shiraacanayeen ka dib markii guuldara badan la soo daristay horjooge cali khaliif ayaa ku baaqay isla markaana ku hanjabay inuu ridi doono dagaal maato doox ah oo lagu hoobtay, ka dib balan qaadoyo isku halayna oo uu ka helay dawlada xamar.
ila looga qaateena oo dhaq-dhaqaaqooda diirada ku hayey ayaa wargeyska SAHAN uxaqiiyey isku halaynta baaqa cali khaliif ka dib kulan balaadhan oo ka dhacay gudaha fila somaliya oo xarunta looga arimiyo somaliya kulankan oo udhaxeeyey xildhibaano wasiiro abtirsiin ahaan ka soo jeeda deegaanka sool oo ku wahelinayey shirka iyo madaxweynaha somaliya xasan sheekh maxamuud.
Kulan kan oo ay cali khaliif iyo colkiisu taageero iyo kaalmo kaga raadinayeen madaxweyne xasan kheekh ayaa jilbaha laysku daray waxaana xogu tibaaxeen in madaxweyne xasan daacad ka ahayn dhismaha maamulka khaatumo sida uu u quudiyo maamulada kalena aanu uga war hayn..
Madaxweyne xasan sheekh oo dalabkooda ka jawaabaya ayaa muujiyey sida uu ugu heelan yahay isla markaana uga soo hor jeedo somaliland, waxaana uu madaxweyne xasan ugu deeqay lacag dhan “Laba Malyan Oo Dollarka” si ay ufuliyaan Ujeedkoda intaas ka dib is afgarad iyo bogaadin labada dhinac ah ayaa dhacdey. Ilahan aan warka ka helayno ayaa tibaaxaya intaas ka dib in xildhibaanada, horjooge cali khaliif iyo wasiirada madaxweynuhu ay su,aal iska weydiiyeen habka ay lacagta lagu bixinayo iyo baahida ugu badan ee imika ay ubaahan yihiin in lagu fuliyo lacagtaas, waxaana isla qaateen inay lacagtan ku bixiyaan qaab ay isla waafaqeen isla markaana ah caawimo ama Human Terrain. Iyaga oona umarinaya Nin Ay isku Jifo yihiin Cali khaliif galaydh oo Hayad haysta.
Ilahan dhaq-dhaqaaqooda diirada ku hayey ayaa sheegay in laysla qaatay in lacagta hub ay siistaan si ay iskaga dhiciyaan ciidamada somaliland taas oo uu aad usoo dhaweeyey madaxweynaha somaliya isla markaana ku raacay .
Sidoo kale waxaa laysla darsay qaabka hubka loo soo iibinayo iyo halka la soo marinayaan maadaama somaliya cunaqabayayn hubka ah saarantahay dood dheer iyo aragtiyo kala gadisan kadib waxaa laysla qaatay in hubkaas laga soo dejiyo xeebaha mudug- ama galmudug ee somaliya .. ka dibna diyaarado lagaga raro mudug iyadoo laga dejinayo magaalada buuhoodle loona ee kaysiinayo wafti ka soo degay garoonka diyaaradaha ee buuhoodle .
Galmudug state ayaa aha maamulkii ugu horeeyey ee ictiraafa maamulka khaatumo, sidaasna lagu hubeeyo ciidamo jabhad ah oo gaadhaya 300 oo ciidan oo dhawaanahanba lagu tababarayey magaalada buuhoodle.
Ciidamadan la tababarayo ayaa ahaa qaar loo qorsheeyey inay ridaan dagaal ku dhufoo ka dhaqaaqa oo ay tuur tuur u adeegsadaan ciidamada somaliland si waxyeelo loogu sameeyo nabada somaliland.
Qorshahan dhagaraysan ee ay magaleegayaan maamulka xamar ayaa la mid ahaa kii jabhadii la saxal saaray ee suldaan wabar oo ay quudinayeen dawlada xasan sheekh si loogu wax yeeleeyo jiritaanka somaliland balse la fashiliyey, mashruucan oo kale ayaa ah mid mataanaynaya kii wabar ee la baabiiyey waxaana imika gudaha buuhoole shirar uga socdaan khaatumo seeg iyo xildhibaano mashruuc ku soo qaatay hubkan dhicisoobay iyo wiiqida qaranimada somaliland.
Tirada ciidamada la tababarayo ayaa ah tiro isleeg ciidamada la tababarayo ayaa ha 300 boqol halka hubkuna yahay isla 300 boqol oo qori.
Hubkan la qabtay ee Ciidamada Badda Australia ayaa gacanta ku dhigay Doon hub siday oo ku soo jeeday Soomaaliya, meel 170-neutical Mile u jirta Xeebaha Cumaan. Hubkan ayaa ka koobnaa 1989 qoriga AK47, 100 gatnaalada garabka laga tuuro, 49BKm Russian ah iyo 60 hoobiye .
Admiral David Johnston oo ka mid ah saraakiisha ciidanka badda Australia ayaa sheegay in doonida markii hore ay ka shakiyeen, taasna ay keentay in gacanta lagu dhigo. Hubka ay siday Doonidan oo u qaab ekeyd nooc kaluumeysi ayaa lagu qariyay shabaqyada lagu jilaabto. waxaana la xaqiijiyay inuu hubkaas ku soo wajahnaa Xeebaha Soomaaliya. Taas oo marag ka noqonaysa qorsha dhicisoobay ee ay la haayeen dawlada xasan sheekh ee utafa xaydatay hagardaamaynta somaliland xukuumada somaliland ayaa ah mid ubaahan inay fiiro gaara u yeelato shirqoolo farsamaysan oo la nashqadeeyey.
Wargeyska SAHAN ayaa isagu helay halka uu u socdey hubkii la qabtay iyo ciidamadii loogu tallo galay oo tobabar uga socdo degmo somaliland kamid ah.
Mursal Muuse Oo Been Abuur Ku Tilmaamay Wararki Suuqa Ugu Jiray Baryahanba Oo Hees Ugu Jawaabay Khadra Silimo
Somaliland: “Allahayow, Somaliland Sii Dawlad Damal Ah, Guurti Talisa, Gole Shacab Ah, Hogaan Dacad Ah, Tashi Wadar Ah Iyo Shacab Mida Ah Oo Meel U Wada Jeeda”! Cabdikarriim Axmed Moogge